नेपाली सेना Archives | Page3of5| Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - भोली सैनिक मञ्चमा १८ हजार पूर्व सैनिक भेला हुँदै - page 3
सेना दिवसको तयारी पुरा, आतिशबाजीदेखि तोप बढाइँसम्म हेर्न राष्ट्रप्रमुखलाई निमन्त्रणा
२९ माघ, काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अंगको रुपमा रहेको नेपाली सेनाले शिवरात्रिका अवसरमा मंगलबार मुलुकभर सेना दिवस मनाउँदै छ । सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शिवरात्रि तथा सेना दिवसकै अवसरमा मंगलबार अपराह्न सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने बढाइँ तथा सैनिक कला प्रदर्शनीमा प्रमुख अतिथिका रुपमा सहभागी हुनेछिन् । नेपाली सेनाले दुई दशकअघिदेखि महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । सैनिक मञ्चमा सैनिक सामग्रीको प्रदर्शनीदेखि परेड (शस्त्राभ्यास), प्यारा जम्प, कवाज तथा तोप बढाइँसम्मका विविध कार्यक्रम हुनेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर सुविधासम्पन्न बिजनेश कम्प्लेक्स !
५ माघ, काठमाडौं । ऐतिहासिक त्रि–चन्द्र मिलिटरी हस्पिटल मासेर नक्शा समेत पास नगरी हतार–हतार बिजनेश कम्प्लेक्स बनाएको जंगी अड्डा अहिले महानगरलाई प्रमाणपत्रका लागि दबाब दिइरहेको छ । यस कुराले सैनिक नेतृत्वको पैसा मोह र विधि मिच्ने शृंखलाको खुलासा भएको छ । १९८२ सालमा निर्मित त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल । पहिलो विश्वयुद्धबाट प्रभावित नेपाली सैनिकहरुको उपचार र स्वास्थ्य सेवाका लागि बेलायतले निर्माण गरिदिएको ऐतिहासिक महत्वको यही अस्पताल भत्काएर सेनाले बिजनेश कम्प्लेक्स बनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सेनाले तयार गर्ने भयो काठमाडौँ–तराई मधेश दु्रतमार्गको डिपिआर
२ माघ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई मधेश दु्रतमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) आफैँ तयार गर्ने भएको छ । द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा हालसम्म भएको कार्यप्रगतिबारे सैनिक मुख्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना उपप्रमुख सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनालले उक्त जानकारी दिएका हुन् । उक्त द्रुतमार्गको डिपिआर यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार गरेको थियो । डिपिआर भारतीय पक्षसँग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विगतमा निकै छलफल र बहस भएको थियो । भारतीय पक्षसँग डिपिआरबारे सहमतिमा पुग्न समिति नै गठन गरिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
सहायक रथी विष्ट सैनिक हिरासतमा
२१ पुस, काठमाडौं । बैंकिङ कसुर लागेका नेपाली सेनाका सहायक रथी डा. रमेश विष्टलाई सैनिक हिरासतमा राखेको छ। डा. विष्टलाई उपत्यका पृतना कार्यालय नारायणहिटी राखेर सेनाले कोर्ट मार्सल शुरू गरेको हो । कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना प्रकरणमा सहायक रथी विष्ट पनि मुछिएका थिए । न्युरोड शाखाबाट हिनामिना गरिएको करिब पाँच करोडमध्ये ३३ लाख सहायक रथी विष्टको बैंक खातामा पाइएपछि उनीमाथि अनुसन्धान शुरू भएको सैनिक मुख्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। बैंकको न्युरोडस्थित शाखा कार्यालयबाट चार करोड ९१ लाख हिनामिना भएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
जाम्बियाका सेनाप्रमुख नेपाल भ्रमणमा
१९ पुस, काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाका सेनाप्रमुख पल मिहोभा नेपालको साताव्यापी औपचारिक सद्भावना भ्रमणका सिलसिलामा आज साँझ राजधानी आइपुग्ने भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानसँग उनले बेग्लाबेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । साथै उनले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीसँग जंगी अड्डामा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।	थप पढ्नुहोस्
सैनिक प्रवक्तामा सहायकरथी भण्डारी
१५ पुस, काठमाडौं । नेपाली सेनाले सहायकरथी गोकुल भण्डारीलाई सैनिक प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको छ । धनकुटाको हिलेस्थित–२ नम्बर बाहिनीको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहायकरथी भण्डारीले केही दिनमै प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । हालका प्रवक्ता सहायकरथी नैनराज दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत दक्षिण सुडानमा पश्चिम क्षेत्रको कमाण्डरको जिम्मेवारी पाएपछि सेनाले प्रवक्तामा भण्डारीलाई ल्याएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानसेनापति खुला म्याराथन माघमा, नवयुगको गोलसँगै आर्मी फाइनलमा
२८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाको आयोजनामा प्रधानसेनापति तेस्रो खुला म्याराथन प्रतियोगिता आगामी माघ १० गते हुने भएको छ । प्रतियोगितामा पाँच विधामा प्रतिष्पर्धा हुने र फुल म्याराथन ४२.१९५ किमी, हाफ म्याराथन, १० किमि भेट्रानतर्फ ४५ वर्षमाथि पुरुष÷महिला र पाँच किमि म्याराथनमा विद्यालय छात्र÷छात्रा, सैनिक विद्यालय, सैनिक अधिकृत तथा सकल दर्जाका छोराछोेरीले सहभागिता जनाउन पाउने आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
सेनाको गाडी पल्टिँदा १४ घाइते
१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाको गाडी हिजो सँझ अछामको साँफेबगर–मंगलसेन सडक खण्डको तिमिल्सेनमा पल्टिँदा १४ घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुईको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । लु १ ग २७८ नं को गाडी तिमिल्सेनको ओरालोमा पल्टिएको हो । गुड्दै गरेको बेला ‘ब्रेकफेल’ भएको गाडी पल्टिएको बताइएको छ । घाइेतलाई उपचारका लागि बयलपाटा अस्पतालमा लगिएको अछामका प्रहरी प्रमुख दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्